UWiko uphehlelela uJerry 2 kunye nezixhobo zeSunny 2 zokuqaqambisa ihlobo | Iindaba zeGajethi
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besikhatshwa Wiko kukhenketho olumnandi lweSekethe yaseJarana ukunikela ubungqina buqu yenye yezona zinto zisandula ukwenzeka kunye nezona zimangalisayo. Kodwa inkampani ayiyeki ukumilisela izixhobo ngenjongo yokuqaqambisa imarike encinci kunye nenamandla, ihlala igcina indawo enye yedemokhrasi yethekhnoloji ebenze ukuba baphumelele. Umzekelo kukuphononongwa esikunike i-Wiko Ufeel Prime, Isinxibo esiphezulu sinxibe ufele lwegusha.
Namhlanje sizisa Iindaba ze-Wiko Jerry 2 kunye ne-Sunny 2, zombini iimodeli ezaziwa kakuhle ngabo balandela uphawu, kuba zezona modeli zintle kwaye zifikelelekayo kwinkampani. Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi izinto ezintsha kwezi zixhobo, yiza sizokuxelela.
1 UWiko Jerry 2
2 Ilanga 2
UWiko Jerry 2
UJerry 2 Ukudibanisa uyilo lwesitayile kunye nokugqitywa kwesinyithi kwaye kubonelela ngamava omsebenzisi agudileyo kunye nobuchule, aqinisekisiweyo enkosi kumqhubekekisi wayo I-1.3 GHz Quad-Core, wayesazi Imemori ye-RAM de 1 GB kunye nenkqubo yokusebenza kaGoogle yamva nje, Android 7.0 Nougat. Ukuhamba neetoni zakho zasehlotyeni ungazithenga kuzo dorado, indawo engwevu, isilivere kunye netarbonisi. Kodwa njengesiqhelo eyona nto ixabisayo lixabiso layo le- € 99.
Ilanga 2, ngobungakanani obuncinci obunokulawulwa, ine-processor I-Quad-Core 1.2 GHz kunye ne-512 Mb ye-RAM. Zombini ezi zixhobo zine Ikhamera ephambili ye-5MPy SIM ezimbini. Ungayidibanisa kwi- lamoni, isilivere, i-turquoise kunye ne-grey space, kwaye ubambe ngenxa yenxalenye ye- € 59. Kucacile ukuba sijamelene nesixhobo esinciphise imemori ye-RAM enokubangela ngaphezulu kwesinye seentloko zomsebenzisi oyingcali, kodwa ngaphezulu kokunxibelelana okokuqala ne-smartphone, ngaphandle kokulibala ixabiso layo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » UWiko usungula izixhobo zikaJerry 2 kunye neLanga 2 zokuqaqambisa ihlobo